Fanavaozana vaovao ho an'ny Samsung Galaxy Watch hanatsarana ny fitoniana amin'ny Samsung Health | Androidsis
Smartwatches dia nanjary famenony mety ho an'ireo mpampiasa rehetra izay aza te-tsy hahita fampandrenesana ny terminal anao, ankoatry ny maha mpiara-dia anao tonga lafatra ho an'ireo mpampiasa rehetra te-hanisa ny asany ara-panatanjahantena.
Samsung dia mametraka eo am-pelatanantsika modely mifanentana amin'ny Android, na eo aza ny fitantanana Tizen, modely mifanaraka amin'ny filantsika rehetra. Ho fanampin'izay, mamoaka tsy tapaka ny fanavaozana izy hanatsarana ny asany na manampy fiasa vaovao. Vao nahazo fanavaozana vaovao ity maodely ity.
Ny Galaxy Watch dia nahazo fanavaozana lozisialy vaovao mifantoka amin'izany manatsara ny fahamendrehan'ny Samsung Health, ny fampiharana izay tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny angon-drakitra rehetra azo tamin'ny alàlan'ny smartwatches Samsung sy ny fehin-tànana nanisa.
Ao amin'ny antsipirian'ny fanavaozana, Samsung dia manondro fa ny fahamarinan'ny Samsung Health dia nihatsara, tsy mandeha amin'ny antsipiriany bebe kokoa. Tena manaitra ity fanavaozana ity satria nohavaozina tamin'ny herinandro lasa teo ilay fampiharana ho an'ny manampy fanohanana ny Galaxy Fit ary koa ny manamboatra bug isan-karazany.
Ny mazava dia ny fiaraha-fanavaozana ny Samsung Health sy ny Galaxy Watch no miara-miasa, ary azo inoana fa samy vokatra ireo miasa haingana kokoa sy mahomby kokoa izy ireo izay nohaniko mandra-potoana.
Ity fanavaozana vaovao ity dia mitana ny 11 MB, ny kinova R800XXU1CSE1 ary afaka isika misintona azy mivantana avy amin'ny app Galaxy Gear avy amin'ny terminal anay. Raha mbola tsy nahazo ny fanavaozana ianao dia azonao atao ny manery azy io amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny safidy Misintona fanavaozana ny tanana.
Amin'izao fotoana izao ihany ny maodely Wi-Fi no nahazo ity fanavaozana ity, Ka raha manana kinova LTE ianao dia mila miandry herinandro vitsivitsy hafa, na dia misy vintana kely aza dia andro vitsivitsy monja. Raha vantany vao misy io dia hampahafantatra anao haingana ny Androidsis.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Fanavaozana vaovao ho an'ny Samsung Galaxy Watch hanatsarana ny fitoniana an'ny Samsung Health
Huawei dia hanolotra ny MediaPad M6 amin'ity herinandro ity
Naseho ny vidin'ny Galaxy S10 5G any Eropa